လူမျိုးတုန်းဘေးသင့်သူများ ပြတိုက်မှာ ရေးခဲ့တဲ့ အမေရိကန်သမ္မတ ၂ဦး၏ စာ နှိုင်းယှဉ်စရာ | MoeMaKa Burmese News & Media
လူမျိုးတုန်းဘေးသင့်သူများ ပြတိုက်မှာ ရေးခဲ့တဲ့ အမေရိကန်သမ္မတ ၂ဦး၏ စာ နှိုင်းယှဉ်စရာ
(မိုက်ခဲစိန်) မေ ၂၅၊ ၂၀၁၇
အစ္စရေးနိုင်ငံမှာ ရှိတဲ့ လူမျိုးတုံးဘေးသင့်သူများပြတိုက် Holocaust Museum မှာ ကမ္ဘာစစ်အတွင်း အာဏာရှင်လက်ချက်နဲ့ ဂျုးလူမျိုးတွေ အစုလိုက် လူမျိုးတုန်းသတ်ဖြတ်ခံရခြင်း မှတ်တမ်းတွေကို ယမန်နေ့က အမေရိကန်သမ္မတကြီး ထရန့် သွားရောက် ကြည့်ရှုခဲ့ပါတယ်။ ထုံးစံအတိုင်း ဧည့်မှတ်တမ်းမှာ သမ္မတကြီး ထရန့်က အမှတ်တရစာရေးသားခဲ့ပါတယ်။ သူရေးတဲ့စာဟာ သူငယ်တန်းကလေး အော်တိုစာအုပ်မှာ ရေးထားသလို ပြီးစလွယ် အလေးအနက် မထားတာကြောင့် ပရိသတ်တွေက ဝေဖန်နေကြပါတယ်။ ကေကာင်းပါပြီ၊ အမရိကန် သမ္မတဖြစ်ခဲ့တဲ့ အိုဘားမားရေးခဲ့တဲ့ ဧည့်မှတ်တမ်းစာနဲ့ နှိုင်းယှဉ်လိုက်ရင် သဘောပေါက်သွားကြပါလိမ့်မယ် ခင်ဗျား။
I am grateful to Yad Vashem and all of those responsible for this remarkable institution. Atatime of great peril and promise, war and strife, we are blessed to have suchapowerful reminder of man’s potential for great evil, but also our capacity to rise up from tragedy and remake our world. Let our children come here, and know this history, so that they can add their voices to proclaim ‘never again.’ And may we remember those who perished, not only as victims, but also as individuals who hoped and loved and dreamed like us, and who have become symbols of the human spirit.